Wondershare MobileTrans Maka Mac Review - Best Wondershare MobileTrans maka Mac Review
mbụ na-agbalị site John Schulte
M ekwenyegh ya n'ezie ga-arụ ọrụ ma ọ n'ezie mere. 476 songs depụtaghachiri si m iPad m iPhone ọ banyere asaa nkeji. M azụ na azụmahịa.
Ichekwa Up na-adịghị ihe nsogbu site Mehmet R. OZDEDE
M a mac ọrụ na onye m na-eji Samsung Galaxy Cheta 3 fọrọ nke nta 2 afọ. Ma Kies ma ọ bụ smart mgba ọkụ nwere ike kwadoo m data. Agbalịrị m ụbọchị 2. M bụ ya na-emezughị; ruo mgbe m hụrụ na wondershare. Ọ bụ ndị dị otú ahụ a oké omume. Na ikpe mbipute i nwere ike ndabere gị na ngwaọrụ na MacBook. Enwere m nnọọ ekele. M dere na ikwu na ekele mgbe m na-akwado nke ọma. M nnọọ ụtọ, chọrọ ịkọrọ unu nile. Ọ dịghị ihe ọzọ imefusị oge. Dị nnọọ download wondershare ... ekele ụmụ okorobịa
Magburu onwe Software site Alessio
M mkpa nyefee niile m na data si m ochie ama na a usoro m ike ime nke a na ihe n'ụzọ dị mfe.
Amamiihe site Lin Ubi
Nọrọ afọ agbalị nyefee ozi ederede site na a HTC onye ọhụrụ IPhone na ihe ọ bụla na-arụ ọrụ. Zụrụ a na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na-ebufe 8.466 ozi n'oge na-adịghị mgbe niile. Nwere ike ghara ikwupụta otú ihe a zọpụta m. Kpọfere ndị ọzọ nile data dị ka nke ọma (photos, music, listi ọkpụkpọ, kọntaktị wdg) na otu onye dị mfe usoro. Ihe m nwere ime bụ ikwunye ma igwe na na software ghọtara ha ozugbo na otu pịa data e zigara n'elu. M na-eji a Mac na e nweghị nsogbu. Dị nnọọ amamiihe.
Awesome Product site Betsy McCrate
A gwara m na site a ahịa ọrụ Rep na Sprint na apụghị m nyefee m music si m iPhone 4s ka ọhụrụ m Galaxy s5. Mgbe ahụ, m googled ya ma hụ ngwaahịa a. M bụ obi abụọ, ma m na-akwụ ụgwọ ego na-ele anya n'ihi na ihe kasị mma! M nwere ikwu na ị mkpa inwe ndidi mgbe iri ọrụ abụọ igwe elu maka omume na-agụ gị ochie ekwentị ọ bụrụ na ọ nwere otutu data. Ozugbo na e mere (na ọ were dịkarịa ala nkeji 10 n'ihi na ọ na-agụ m data) m see button nyefee na usoro bụ ezigbo mmiri. Ọ eleghị anya were banyere 5 nkeji n'ihi na ọ nyefee 150 songs. M ga-akwado ngwaahịa a na onye ọ bụla kwesịrị nyefee data site na otu ekwentị ọzọ!
Nexus Nirvana site Elias Eldabbagh
M didn \_ 't eche na ọ bụ na o kwere omume ka mmekọrịta m Android, Nexus 5 na ndị niile ochie stof si m iPhone. Nke a mere na atọ! Na-ekele unu maka oké software. Couldn \_ 't ịjụ maka ihe ọ bụla mma!
A isi ọwụwa nchekwa! Site Humphrey Hill
A nsogbu free ahụmahụ. M karịsịa ekele maka eziokwu ahụ bụ na, software bụ otú mfe iji na ị Don \_ 't nwere ịlebanye anya na ntuziaka. A isi ọwụwa nchekwa!
Ihe m mbupụ site Jesse Brook
Nwere ikwu na ọ \_ 's mfe wụnye ya na mfe iji ya. Ọ na-eme ihe o nwere na-eme ma na \_ 's ihe m na-atụ anya ekele!
Daalụ site Augus Smith
iTunes kwuru ekwentị m data E merụrụ na chọrọ ihicha ekwentị m n'ihu na-eme a weghachi. Maa ihe .... Ọ wasn \_ 't emerụ ....._ 1_698_1_ agafere ihe niile (ma e wezụga ngwa ọdịnala) ka ọhụrụ m Samsung Galaxy dee 3.What a enyemaka ....... dịghị mgbe m mmasị iTunes mgbe ọ nyere m nsogbu. Daalụ _1_698_1 _.... amamiihe
Great site Sean Wood
Ezigbo ngwaahịa na ọrụ dị ka advertised. Afọ ojuju.
Mfe ndabere Android data & Jikwaa gị mgbasa ozi faịlụ, kọntaktị, ozi ederede na ngwa ọdịnala na Mac! Mụtakwuo